Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499384 times)
« Reply #40 on: May 03, 2011, 02:26:16 PM »
ပြီးတော့ ရဲသားကြီးကို "ဟေ့ ရဲသားကြီး နောက်15မိနစ်လောက်နေရင်
ရဲမှုးကြီးက"ဟေ့ ရဲဘော် ဘာလို့တာဝန်ကျနေရာမှာမရှိဘဲ လျှောက်ပြေးနေရတာလဲ"
ဒီတော့ ရဲသားကြီးက "ဟိုရှေ့မှာပြေးသွားတဲ့ကလေးလေ ကျွန်တော့်ကို နောက်15မိနစ်နေရင်
"မင်းကလဲကွာ အေးဆေးပေါ့ 15 မိနစ်ကြီးတောင် ကျန်သေးတာကိုး"
“မောင်တိုးလေး... မင်းဖေဖေနဲ့ မေမေ ညကျရင် ဘယ်လိုအိပ်သလဲကွ...
“ဟီး...ဟီး...သိတာပေါ့ဗျာ.... ကျွန်တော်နဲ့ တူတူအိပ်တာပဲဟာ....
“ဟုတ်လား...အဲဒါဆို အစ်ကိုတို့ကို ပြောပြပါလား...“
“ပြောပါကွ... မောင်တိုးလေးက လိမ္မာပါတယ်....“
“ဟာဗျာ... မပြောရဲပါဘူးဗျာ... သွားတော့မယ်...ဗိုက်ဆာလာပြီ.....“
“နေပါဦး မောင်တိုးလေးရ...ကိုကြီးတို့ မုန့်ဝယ်ကျွေးမှာပေါ့...
“ကဲ.. မောင်တိုးလေး.. စားပြီးပြီဆို ပြောပြတော့လေ...ဟီး..ဟီး..“
“ပြောဆိုလည်း ပြောပြရတာပေါ့ဗျာ... အမေက စောင်လေးခြုံပြီး အိပ်တယ်ဗျ...အဖေကတော့
လက်နှစ်ဘက်ကို ပေါင်ကြားထိုးပြီး ကွေးကွေးလေး အိပ်တယ်ဗျ....“
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ လူတစ်ယောက် မျက်စိကြီး အတင်းမှိတ်ပြီး ထိုင်နေတဲ့သူကို သူ့ရှေ့ကလူက
“မိတ်ဆွေ.. ခင်ဗျား ခေါင်းမူးနေလို့လား... အန်ချင် နေတာလား.... ကျွန်တော်ဘာများ
“ကျုပ်ကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးဗျာ... ကျုပ်ရှေ့မှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ မတ်တပ်ရပ်
« Reply #41 on: May 03, 2011, 02:29:51 PM »
ဘယ်ညာ အချက်ပြမီး ပျက်နေလို့ ကားမောင်းရင်း လက်တစ်ဖက်ကို အပြင်ထုတ်ထုတ်ပြီး အချက်ပြ
နေရတဲ့ ဘတ်စ်ကား ဒရိုင်ဘာကို အစိုးရိမ်ကြီးတဲ့ အဘွားအို တစ်ယောက်က
“သားလေးရယ် သားလေးရဲ့ လက်တွေကို အဲဒီ ဘီးအဝိုင်းကြီးကိုသာ
ကွယ်.... အပြင်မှာ မိုးရွာမရွာ သိချင်ရင် အမေကြီး သေချာ ကြည့်ထားပေးပါ့မယ်နော်...“
“ကျွန်တော်က ကြုံတိုင်းရွာမှာ မွေးတာပါ....“
“ဟုတ်လား ကြုံတိုင်းဆို ကျုပ်သိတယ်... ဘယ်အပိုင်း မွေးတာလဲ...“
“တစ်ကိုယ်လုံးပေါ့ဗျ... ရူးနေလားမသိဘူး....ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ မေးတတ်တယ်“
ကျွန်တော် သူ့ကိုချစ်မိနေလို့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့တိုင်ပင်တယ်ဗျာ။
အဲဒါကို မောင်မင်းကြီးသားက “မလုပ်နဲ့ အဲဒါကြိုတင်ကြံစည်မှု” တဲ့၊
အဲဒါကြောင့် သူအပြင်ထွက်တဲ့အခါ စာလိုက်ပေးမယ်ပြောပြန်တော့ သကောင့်သားက
“မလုပ်နဲ့ အဲဒါ ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှု” တဲ့ဗျာ။“အိုကွာ ဒါဆိုရင်
သူမြင်သာအောင် သူ့အိမ်ရှေ့ ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန်လုပ်မယ်ကွာ”၊ “ဟကောင်ရ
အဲဒါ မသင်္ကာမှုနဲ့ ငြိမယ်ကွ မလုပ်နဲ့” တဲ့၊ “ဟာဒါဆိုရင်တော့
ဂစ်တာလေးတီးပြီးတော့ သူသိအောင် လုပ်ပါရစေကွာ”၊ “သြော်
မင်းကဆူပူသောင်းကျန်းမှုနဲ့ ငြိချင် နေပြီထင်တယ်” တဲ့၊
လုပ်ပြန်ပြီဗျာ၊ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲ။ “ကျွန်တော်ချစ်တာကို
သူမသိနိုင်ရင်နေပါစေတော့၊ ချောင်ကွယ်တနေရာကနေပဲ ငေးတော့မယ်ကွာ၊
ကိုယ်ချစ်နေရရင်ပြီးတာပါပဲလေ”၊ “ဟာ မင်းကလဲကွာ မှောင်ရိပ်ခိုမှုတွေ
ဘာတွေနဲ့ငြိနေဦးမယ်နော်၊ ကြည့်လုပ် ကြည့်လုပ်”၊ “ဟ မင်းဟာက အမှုတွေ
များလှချည်လား၊တော်ပြီကွာ မချစ်တော့ဘူး”၊ “ဟေ့ ဟေ့ မလုပ်နဲ့ မလုပ်နဲ့
အဲဒါမှထိန်ချန်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက် ငြိသွားမယ်” တဲ့။
ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲဗျာ၊ကျွန်တော်လဲ မကြံတတ်တော့ဘူး၊ စဉ်းစားပေးကြပါဦး။
« Reply #42 on: May 03, 2011, 02:54:32 PM »
ခွဲစိတ်ခန်းထဲသို့ လူနာ ဂျေဂျေကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
လူနာအား မေ့ဆေးပေးရန်အတွက် မေ့ဆေးဆရာဝန် ရောက်လာသည်။
ရေချိန်ကိုက်နေသော မေ့ဆေးဆရာဝန် ဒေါက်တာ ဖရိုက်အား လူနာဂျေဂျေမှ
“ဆရာ မူးနေတာလား ခင်ဗျာ”
“ဗျာ... ကျွန်တော့်ကို မူးနေတယ်လို့ ပြောတာလား ကျွန်တော်မမူးပါဘူး
မူးတာက ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဒေါက်တာ လမ်းမတော်သားဗျ
ဒီလူမှ တကယ်မူးနေတာ သူရောက်လာရင်ကြည့်”
..သူမအဖေကလည်းအိမ်ရှေ့ ဝရန်တာ သို့ ထွက် ကာကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခြင်း
ဖြစ်သည်.။ထို့ ကြောင့်တနေ့ တွင်
“ ဘာဖြစ်လို့ သမီးအသံလေ့ကျင့်တိုင်း..အဖေကလည်းဝရန်တာထွက်ပြီး
ကိုယ်လက်လေ့ကျင့် ရတာလဲ “
« Reply #43 on: May 04, 2011, 09:28:55 PM »
လူတစ်ယောက်ဟာ ဆိုင်ကယ်စီးရင် လေတိုးသက်သာအောင်ဆိုပြီး အနွေးထည်ကို
နောက်ပြန်ဝတ်တတ်သတဲ့။ တစ်နေ့တော့ အရက်မူးပြီး သူဆိုင်ကယ်မှောက်တယ်။
တစ်နေ့မှာ ခရီးသွားတစ်ယောက် ခရီးသွားရင်း လမ်းမှားခဲ့တယ်။ ခရီးသွားက
"လကမ္ဘာဆိုတာ အကြီးကြီးပဲ။ လူ သန်းပေါင်းအများကြီး နေနိုင်တယ်"
ပထဝီဝင်ဆရာတစ်ဦးက ကလေးတွေကို ရှင်းပြတယ်။ အဲဒီမှာ ကလေးတစ်ယောက်က
"ဒီလိုဆို မလွယ်ဘူးဆရာ... လဆန်း၊ လကွယ်ရောက်ရင် လူတွေ ကျပ်ညှပ်ပြီး
« Reply #44 on: May 05, 2011, 04:48:22 PM »
နာမကျန်းတဲ့ အဘိုးအိုတစ်ဦး ဆရာဝန်သွားပြတော့ ဆရာဝန်က စမ်းသပ်ပြီး ရောဂါအခြေအနေ ဆိုးမှန်းသိတော့ အဘိုးအို လုပ်သင့်တာ လုပ်နိုင်အောင် မကွယ်မ၀ှက်ဘဲ ပြောပြလိုက်တယ်။
ဆရာဝန်က အဘိုးအိုကို “ခင်ဗျားလည်း ခင်ဗျားရောဂါ အခြေအနေအမှန်ကို သိချင်နေမယ်ထင်တယ်။ အခြေအနေကတော့ သိပ်မကောင်းဘူး။ ခင်ဗျားဘယ်သူနဲ့ တွေ့ချင်သလဲ ပြောပါ ကျွန်တော် ကူညီမယ်” လို့ ပြောတော့ အဘိုးအိုက ခေါင်းညိတ်ပြီး လေသံ တိုးတိုးလေးနဲ့ “ ဟုတ်ကဲ့... ကျွန်တော် နောက်ဆရာဝန် တစ်ဦးနဲ့ တွေ့ချင်တယ်” လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဆေးခန်းကို လူနာတစ်ယောက် ရေးကြီးသုတ်ပြာ ပြေးလာပြီး
“ဆရာ..ဆရာ.. ကျွန်တော့်ကို ကယ်ပါ။ ကျွန်တော် ဓာတ်ဆီ မှားသောက်မိလို့” လို့ ပြောတော့ ဆရာဝန်က “ ကိစ္စမရှိဘူး။ ဒီရက်အတောအတွင်း ခင်ဗျား ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့” လို့ ပြန်ဖြေသတဲ့။
« Reply #45 on: May 06, 2011, 01:38:15 PM »
အမျိုးသမီး-တကယ် ချစ်ရဲ့ လားဟင်?
အမျိုးသား ဘုရားစူးရစေရဲ့  ဒီမေးခွန်းမျိုး မေးတောင်မမေးပါနဲ့လား
အပေါ်က စကားလေးတွေကို အောက်ကနေသာ ပြန်စဖတ်လိုက်ပါ ဒီအတိုင်းပါပဲ။
« Reply #46 on: May 09, 2011, 04:44:07 PM »
"ကျွန်တော် ရေနွေးတဲ့အထိ စောင့်နေတာပါ"
သူပြန်ဖြေလိုက်တာက "ခင်ဗျား သိပ်တုံးတာပဲ? အေဆိုက်ကုန်လို့ ဘီဆိုက်လှန်လိုက်တာပေါ့"
« Reply #47 on: May 09, 2011, 04:57:01 PM »
“ပထမ အချက်အနေနဲ့ … … … အဟမ်းအဟမ်း…”
“ရင်ခွဲရုံမှာ… ခွဲတော့ စိတ်တော့မယ်ဆိုရင်… မင်းတို့ မှာ…
ဒီစကားကို လက်ညှိုးတစ်ထောင်ထောင်နဲ့ ပြောနေရင်း… ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ သူ
့လက်ကို မသာကောင်ကြီးရဲ့ စအိုထဲကို ကောက်ကာငင်ကာ နှိုက်ထည့်လိုက်ပြီး… သူ
့ရဲ့ လက်ကို ပြန်ထုတ်… ပါးစပ်နဲ့စုပ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။
ကြည့်နေကြတဲ့ သူတွေအားလုံး လန့် ဖြန့် ကုန်တော့တာပေါ့။ ကျောင်းသားတွေ ဆီက
အာမေဋိတ်သံတွေ ထွက်လို့မဆုံးခင်မှာတင်ပဲ ဆရာက …
“ကဲ… အားလုံးမြင်ပြီးကြတဲ့အတိုင်း… မင်းတို့တွေ
ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့… ဆရာလုပ်ပြတဲ့ အတိုင်း လိုက်လုပ်ကြပေတော့”
‘ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင’် ဆိုတဲ့ စကားဟာ အတော့်ကိုပဲ ‘တာ’ သွားပါတယ်။
စောစောတုန်းက ‘ဟင်’ ရယ် ‘ ဟယ်’ ရယ် လုပ်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ အဲဒီ
မသတီစရာ အပုတ်ကောင်ကြီးကို ဘယ်လိုမှ ရွံရှာမနေနိုင်တော့ပါဘူး။
လက်ညှိုးလေးကိုထောင်… အပေါက်ကလေးထဲကို ထည့်… ပြီးတော့ ‘ပြွတ်’ ကနဲ
ဒီအတိုင်း ကျောင်းသားရော ကျောင်းသူပါမကျန် တလှည့်စီ လိုက်လုပ်ကြပါတော့တယ်။
အားလုံးလက်တွေ့ လုပ်ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာတော့ ပရော်ဖက်ဆာက ကျန်ရှိနေသေးတဲ့
တစ်ချက်ကို ဆက်ပြီး ပို့ ချတာပေါ့။
“ဒုတိယအချက်ကတော့… ပိုပြီး အရေးပါတဲ့..အပြင်… အတွေ့ အကြုံ
မရှိသေးသူများအဖို့ … လိုက်လုပ်ဖို့အင်မတန်မှပဲ ခဲယဉ်းတယ်။ အဲဒီအချက်က
ဘာလဲဆိုတော့… မျက်စိလျင်လျင်ထားပြီး… စူးစမ်းလေ့လာတတ်ဖို့ ပါပဲ။”
“အခုနတုန်းက… ဆရာမင်းတို့ ရှေ့ မှာ နှိုက်ပြတဲ့ လက်က…
လက်ခလယ်ဖြစ်ပြီး… ပါးစပ်ထဲကိုတော့… လက်ခလယ် မဟုတ်ဘဲ… လက်ညှိုးကို
ထည့်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာလိုက်ကြည့်ရသလောက်… ဒီအချက်ကို…
« Reply #48 on: May 09, 2011, 05:31:50 PM »
နာမည်ကြီးပြဇာတ်တစ်ခု တင်ဆက်ရန် ပြဇာတ်ရေးဆရာက လက်စွမ်းပြ ရေးသားပြီးနောက် ပြဇာတ်ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူအား ဖတ်ရှုပြင်ဆင်ရန် ပေးလိုက်လေသည်။
ဒါရိုက်တာ။ ။ ပြဇာတ်က ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။
ပြဇာတ်ရေးဆရာ။ ။ လက်စွမ်းပြထားတာပါ။
ဒါရိုက်တာ။ ။ စိတ်ဝင်စားဖို့လည်း ကောင်းတယ်ဗျ။
ပြဇာတ်ရေးဆရာ။ ။ သေသေချာချာ ရေးထားတာမို့ပါ။
ဒါရိုက်တာ။ ။ တစ်ချက်လောက်တော့ ပြင်ချင်တယ်။
ပြဇာတ်ရေးဆရာ။ ။ ရပါတယ်၊ ပြင်ပါ။
ဒါရိုက်တာ။ ။ နိဂုံးပိုင်းမှာ ဇာတ်လိုက်မင်းသမီးက အဆိပ်သောက် သေတဲ့အစား သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လိုက်တာ ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်။
ပြဇာတ်ရေးဆရာ။ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။
ဒါရိုက်တာ။ ။ ပြဇာတ်ကြည့်ပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေ နိုးသွားအောင်လို့ပါ။
ပြဇာတ်ရေးဆရာ။ ။ ဗျာ......
« Reply #49 on: May 09, 2011, 05:40:26 PM »
"ကျုပ်မိန်းမက အညာမပဲဗျ" လို့ ဒေါသတကြီးဖြစ်နေတဲ့ ခင်ပွန်းသည်က ကရုဏာ သက်နေ သူ သူငယ်ချင်းကို ကားမောင်းရင်း ပြောပါတယ်။
"ခင်ဗျား ဘယ်လိုသိသလဲ?" မိတ်ဆွေက မေးပါရော။
"သူ မနေ့ညက အိမ်ပြန် မလာဘူးလေ။ ကျုပ် သူ့ကို သူဘယ်မှာ ရှိခဲ့သလဲ လို့မေးတော့ သူ တစ်ညလုံး သူ့အစ်မ ဂျက်ဆီနဲ့ အတူ ရှိခဲ့တယ်တဲ့"
"ဆိုတော့ကာ၊ သူ ညာတာပေါ့။ တစ်ညလုံး ကျုပ်က သူ့အစ်မဂျက်ဆီနဲ့အတူ ရှိနေခဲ့တာလေ"
ဆရာဝန် တစ်ယောက်ဟာ သူ့လူနာထံ ဖုန်းဆက်တယ်။
ဆရာဝန်။ ခင်ဗျားပေးတဲ့ ချက်လက်မှတ်က အဆင်မပြေဘူးဗျ။
လူနာ။ အို၊ ခင်ဗျားကုတာလည်း အဲဒီအတိုင်းပါပဲဗျာ။
"အပေါင်းအသင်းက ဘာကြောင့် ရောက်လာ ရတာလဲ" ဟု ထောင်ထဲက အဖော်က အခြား တစ်ဦးကို မေး၏။
"ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ လောက်"
"မြန်မြန် ထွက်မပြေး နိုင်လို့"
"ဘာလို့ မပြေး နိုင်ရတာလဲ?"
"ငွေအိတ်တွေပေါ့ကွာ၊ အရမ်းလေးတာကွာ။ အားလုံးက အကြွေစေ့တွေချည်းပဲကွာ"